Nuqul badan oo feyl ah laga soo qaado Android | Androidsis
Haddii aad raadineyso mid ka mid ah baarayaal faylka ugu fiican ee loogu talagalay Android, shaki kuma jiro inaan heli doonno waxa aan raadineyno ES File Explorer, sahmiyaha faylka gabi ahaanba bilaashka ah ee loogu talagalay Android iyo inaan si rasmi ah uga soo degsan karno Google Play Store, dukaanka arjiga ee Android.
Sida aad ugu arki karto fiidiyowga lifaaqa ah ee maqaalkan, maanta waxaan rabaa inaan ku tuso mid ka mid ah shaqooyinka ugu fiican ee faylalkaan baaraha fekerka leh uu u hayo Android, oo aan ahayn wax kale nuqul feyl badan, isagoo ina siinaya suurtagalnimada iyaga ka xusho faylal fara badan ama dariiqyo hal mar. Marka hadda waad ogtahay, haddii aad rabto inaad aragto sida mid ka mid ah shaqooyinka ugu fiican ee ES File Explorer u shaqeeyo, ha moogaan fiidiyowga aan gaar ahaan adiga kuu sameeyay.
Sideen kuugu sheegaa fiidiyowga ku lifaaqan, mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ama shaqooyinka uu sahamiyaha faylka ugu fiican ee Android leeyahay, kaas oo aniga aanan ahayn cid kale oo aan ahayn ES File Explorer, waa muuqaalka cusub ee nuqul faylka badan noo ogolaanaya inaan ku daalacno gal kasta oo nidaamkayaga ah. Taasi waa, haddii ka hor intaadan nuqulan karin waxa ku jira hal fayl oo keliya, hadda wuxuu noo oggolaanayaa nuqul badan annaga oo u dhex marayna tusaha at our whim si ay u doortaan faylasha si ay u dhinto ama nuqul ka.
Tan waxaa lagu gaaraa iyadoo ka mid noqoshada sabuurad kaas oo loo muujiyey tab ahaan dhinaca bidix ee arjiga marka nuqulka koowaad la xusho. Waa ku mahadsantahay boodhkan yar ee aan awood u yeelan doonno inaan uga gudubno tilmaamaha kala duwan ee barnaamijkeenna Android nuqul ama jar faylasha aan dooneyno inaan u dhaqaaqno ama ku nuqulno hal istaroog.
In kasta oo qaabkan lagu sharaxay waxay umuuqataa xoogaa dhib badan, gaar ahaan kuwa ugu badan ee adeegsada barnaamijka Android, waxaan kuu xaqiijinayaa inay tahay hawl aad u fudud in la isticmaalo iyo inay naga caawin doonto kor u qaadno howlaheena maalinlaha ah ku saabsan maaraynta faylka ee Android waxay ka dhigan tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sidee Koobiyeynta Faylal badan ay ugu shaqeysaa Android oo leh ES File Explorer
Wax walba dhaqso u garaac
Google Drive waa la cusbooneysiiyay dhamaan qalabkiisa wax soo saar waana tan hada ay umuuqato